(England) 29 Jan 2018. Manchester United ayaa isha ku heysa Caawa inay gaarto guushii 7-aad oo xiriir ah horyaalka Premier League marka ay Old Trafford ku marti galineyso kooxda Burnley.
Chris Smalling ayaa Todobo usbuuc uu dhaawac ku maqnaa kaddib dib ugu soo laaban kara garoomada kulanka caawa ee Burnley.
Daafaca ayaan ka soo muuqan garoomada tan iyo 8-da bishii December sababo la xiriira dhibaato cagta ah, balse tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka fikiraya laacibka kaddib markii uu tababarka qaatay usbuucii tagay.
Marcos Rojo iyo Marouane Fellaini ayaa dhaawacyo ku sii maqnaan doona, halka David De Gea uu dib ugu soo laaban doono Goolka kaddib markii la nasiyay ciyaartii FA Cup ay guusha ka gaareen Arsnal.
Robbie Brady ayaa shaki wayn laga muujinayaa inuu u safto Burnley.
Laacibka reer Republic of Ireland ayaa dhaawac ka soo gaaray kulankii ay kooxdiisu Guul darada ka soo gaartay Man City tartanka FA Cup umana badna inuu taam u noqon doono kulanka caawa.
Johann Berg Gudmundsson ayaa soo laaban kara kaddib saddex usbuuc uu ku maqnaa dhaawac bowdada ah, balse waxaa sidoo kale shaki laga muujinayaa Taam ahaanshaha Phil Bardsley iyo Matt Lowton.
Garsoorka: Jonathan Moss (England)
Tan iyo sidii ay guul darada uga soo gaartay kulankoodii ugu horreeyay ebid ay Premier League uga horyimaadaan bishii Agoosto ee 2009, Man United ayaan wax guul darro ah arkin 8-dii kulan ee ugu dambeeyay ay la ciyaarto Burnley (5-guul iyo 3-bar baro), waxayna shabaqooda ilaashadeen lix kulan.
Burnley wax guul ah ma arkin 19-kii kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartamada ay Man United kula soo ciyaarto garoonkooda (12-guul darro iyo 7-bar baro), tan iyo markii ay 5-2 uga adkaadeen kulan horyaalka ah bishii September 1962.
United ayaa leh qiimeynta ugu sarreysa taariikhda Premier League ee guulaha kulamada la ciyaaro Talaadada (62.5%), waxay adkaadeen 30 ka mid ah 48-kulan ay ciyaareen Kulamada dhaca Talaadada.
Talaadada waa maalinka kaliya ee usbuuca uusan marna guul darro la kulmin macalinka Burnley Sean Dyche kulan Premier League ah, Wuxuu guuleystay 3-kulan halka uu bar baro galay 2-kulan, shantii ciyaar uu yeeshay maalmahaan oo kale.
Tan iyo markii ay ka adkaadeen Chelsea kulankii furitaanka ee xilli ciyaareedkii 2017-18, Burnley ayaan wax guul ah gaarin sideedii kulan ee ugu dambeeyay ay bannaanka kula soo ciyaarto Lixda koox ee ugu waa wayn horyaalka, waa laga adkaaday afartii kulan ee ugu dambeeyay oo xiriir ah ee kulamadaas, waxaana laga dhaliyay isku cel celis 1-14.
45% ee ka mid ah 22-dhibcood ay Burnley ku guuleysatay Premier League kal ciyaareedkan ayaa ka yimid afartii kulan ee ugu dambeeyay (3-guul, 1-bar baro, 0-guul darro) halka Man United 41% ee ka mid ah 44-dhibcood ay Premier League ka heshay kal ciyaareedkan ay ka timid lixdii kulan uu xilka Tababare u qabtay Ole Gunnar Solskjaer.
Burnley ayaa kulan Premier League ah kal ciyaareedkan goolasha ku daah furtay 6-kulan oo qura (4-ka mid ah guul ayay gaartay 1-bar baro iyo 1-guul darro) kaliya Cardiff (3-kulan) ayaa sameysay kulamo ka yar Burnley.
Romelu Lukaku ayaa ku lug lahaa lix gool lix kulan uu Premier League uga horyimdi Burnley. 4-gool ayuu dhaliyay halka uu caawiyay labo kale.
Marcus Rashford ayaa goolal dhalinayay 4-tii kulan ee ugu dambeeyay uu ka soo muuqdo Man United, haddii uu kulanka Caawa dhaliyana, wuxuu noqon doonaa laacibka saddexaad ee ugu da’da yar ee 5-kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliya Premier League kaddib Nicolas Anelka 1998-dii iyo Jose Antonio Reyes 2004-kii.
Safafka ay ku soo gali karaan Manchester United vs Burnley:
DEG DEG: Chelsea iyo Manchester United oo qoorta la isku galiyay.....(Arag isku aadka wareega 5-aad ee FA Cup)